Koofiyad - Wikipedia
Noocyo badan koofiyado ah kuwaasi oo loo isticmaalo siyaabo kala duwan.
Koofiyad (; ) waa sheey ka tirsan dharka taasi oo lagu xidho madaxa. Koofiyadu waxay ka mid tahay dharka caadiga ah ee dadku isticmalaan dhamaan dacalada caalamka. Si la mid ah dharka noocyadiisa kala duwan, koofiyada waxaa laga sameeyaa dun, cudbi ama harag xoolo. Qaar ka mid ah koofiyaduhu waa shay dabacsan oo ka samaysan dun, ama cudbi, ama harag kaasi oo la tolay. Dharka waxaa laga sameeyaa dun ka timaada haraga xoolaha, xayawaanka iyo cudbiga iyo noocyo aartifishal ah. Marka dharka la samaynayo waxa la isticmaalaa habab badan oo kala duwan, waxaa ugu caansan tolida, mareegida, iyo isku xidhxidhka dunta.
Koofiyadu waxay ka mid tahay dharka dadku isticmaalaan kaasi oo loo xidho in madaxa ka difaaco dhaxanta, qaboowga, roobka iyo qoraxda. Sidoo kale, koofiyadaha waxaa loo xidhaa xarago iyo isqurxin, labiska iyo damaashaadka. Guud ahaan, koofiyadu waa maro la tolay taasi oo leh qaab le'eg qofka xidhanaya ama isticmaalaya sheygaasi. Koofiyadu waxeey leeyahay astaamo u gaar ah oo ka duwan noocyada kale ee dharka. Astaamaha ugu muhiimsan ee diraca waxaa ka mid ah dhererka oo ka soo bilaabma luqunta (qoorta) ilaa lugaha, midabo badan oo kala duwan, mararka qaar khafiir iyo fudayd.
Ereyga koofiyad asal ahaan waxaa loo malaynayaa inuu ka soo jeedo luuqada Hindiga.
↑ Pauline Thomas (2007-09-08). Fashion-era.com http://www.fashion-era.com/hats-hair/hats_hair_1_wearing_hats_fashion_history.htm. Soo qaatay 2011-07-02. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Koofiyad&oldid=171025"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Sebteembar 2017, marka ee eheed 17:57.